को हुन् ‘वर्ल्डकप गर्ल’, जो तानिरहेछिन् विश्वको ध्यान? - खबरम्यागजिन
को हुन् ‘वर्ल्डकप गर्ल’, जो तानिरहेछिन् विश्वको ध्यान?
June 11, 2018 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि
फरकधार : रुसमा फिफा विश्वकप २०१८ का उद्घाटन हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ । यसका साथै सहभागी टिमको चर्चा पनि व्यापक बन्दै छ। विश्वकै लोकप्रिय खेल फुटबलमा यसपालि कुन देश च्याम्पियन बन्ला भन्ने चासो पनि बढिरहेको छ ।
रुसमा हुने विश्वकपमा खेलाडीसँगै एक रुसी सुन्दरीले पनि सारा विश्वको ध्यान तानेकी छन् । फिफा फिफा विश्वकप २०१८ की ब्रान्ड एम्बेसडर बनाइएकी भिक्टोरिया लोपरेवा पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा छिन् । उनलाई जब ‘वर्ल्डकप गर्ल’ घोषित गरियो, त्यसपछि उनी फुटबलप्रेमीबीच छाएकी छन् ।
३४ वर्षीया भिक्टोरिया सन् २००३ मा ‘मिस रुस’ भइसकेकी छिन् । उनलाई स्कुलका दिनदेखि नै मोडलिङको अफर आउने गरेको भए पनि उनी बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेसनमा ग्रेजुएट भएपछि सन् १९९९ मा मोडलिङमा छिरेकी थिइन् ।
भिक्टोरिया मिस रुससँगै ‘फेस अफ द इयर’ र ‘मोडल अफ द डन’जस्ता धेरै अवार्ड जितेकी छन् । उनलाई ‘वर्ल्र्डकप गर्ल’ भएपछि मात्रै इन्स्टाग्राममा १ मिलियनभन्दा धेरैले फलो गरेका छन् । फुटबलप्रेमीहरू सोसल मिडियामा उनको फोटो व्यापक रूपमा पोस्ट गरिरहेका छन्।
विश्वकपको बेलामा उनलाई स्वस्थ जीवनशैलीका बारेमा जागरूक गर्दै गरेको देख्न पाइनेछ । योसँगै उनले सोसल मिडियामा विश्वकपको चर्चा गर्नेछिन् ।
भिक्टोरिया लोपरेवालाई ‘वर्ल्र्डकप गर्ल’ बनाउनुमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको महत्वपूर्ण हात छ । पुटिनले उनलाई एक फुटबल कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखेका थिए । जब ‘वर्ल्र्डकप गर्ल’ को खोजी हुन थाल्यो, पुटिनले भिक्टोरियाको नाम सुझाएका थिए ।
भिक्टोरिया इंग्लिस फुटबल क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडकी फ्यान हुन् । उनको फेबरेट खेलाडी भने पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र मेस्सी हुन् । यसबाहेक उनलाई फ्रान्सका युवा स्टार खेलाडी पाउल पोग्बा मन पर्छ । कारणबारे उनी भन्छिन्, ‘ऊ निकै स्टाइलिस छ ।’ भिक्टोरिया रोनाल्डोलाई निकै सिम्पल मान्छिन् र नेमारको डे«सिङ सेन्लाबाट पनि प्रभावित रहेको बताउँछिन् ।